काठमाडौं । बरिष्ठ संगीतकार एवं गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको छ । बिहीबार करिब १ः४५ मा उनको न्यूरो अस्पतालमा उनको निधन भएको हो । सास फेर्न गाह्रो भएको र छातीमा समस्या देखिएपछि उनलाई बिहान अस्पताल पुर्याइएको थियो । अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको उनका छोराको साथी सबिन श्रेष्ठले […]
काठमाडौँ– पोखराका पत्रकार राजाराम पौडेलले गीति संग्रह ‘लकडाउन–१२०’ पाठकमाझ ल्याएका छन् । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकी प्राज्ञ परिषद् सदस्य गायिका हरिदेवी कोइराला, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, नेपालका अध्यक्ष रमेश बिजी, प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष गायक पुरुषोत्तम न्यौपाने, नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीका अध्यक्ष तथा गीतकार दीपेन्द्र श्रेष्ठ र कृतिकार […]
काठमाडौं । साहित्यकार पुष्पा धमलाको गजल संग्रह ‘पुष्पहार’ विमोचन भएको छ । राजधानीको कमलादिस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शनिबार एक कार्यक्रममा बीच पुस्तक विमोचन गरिएको हो । हातेमालो साहित्य संगलद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतिको प्रमुख आतिथ्यतामा पुस्तक विमोचन भएको हो । साहित्य क्षेत्रमा निकै रुचि राख्ने […]
नेपाल र नेपालीमाथि केन्द्रित भएर उपन्यास कति लेखिए ? देशभरिका जनताको मनमा बस्न सफल महान् चेतनाले उच्चस्तरका उपन्यास लेखिए या लेखिएनन् ? राजनीतिक–आर्थिक या आर्थिक–सामाजिक मुद्दामा कति उपन्यास लेखिए ? भारतीय नेपाली साहित्यलाई भारतीय साहित्यको रूपमा हेर्ने कि नेपाली साहित्यको रूपमा हेर्ने ? उपन्यास भन्दै खालि उपन्यासिका मात्रै पो लेखियो कि ! किनकि उपन्यास युरोपको संस्कृति हो […]